TOP bogagga shabakadda si loo soo dejiyo ilo bilaash ah oo loogu talagalay Adobe Illustrator | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | muujiye, Khayraadka
Vectors-ku waa xubno muhiim ah maxaa yeelay waxay na siinayaan xorriyad weyn oo waxqabad waxayna na siinayaan qeexitaan sare iyadoo aan loo eegin saamiga aan ku shaqeyno. Adobe Illustrator waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto vectors inkasta oo aan sidoo kale ka heli karno qaar ka mid ah bangiyada garaafyada ee internetka. Intaas waxaa sii dheer, codsigu wuxuu sidoo kale noo ogolaanayaa inaan qaabeyno oo aan naqshadeynno burushkeena iyo sidoo kale inaan ku rakibo burushyo dibadeed. Waxaan sidoo kale ku dari karnaa waxyaabo dibedda ah si aan uga shaqeyno Sawirka sida qaababka ama qaabdhismeedka. Maanta waxaan sameyn doonnaa xulasho ka mid ah bogagga shabakadda ee bixiya ilaha gaar ahaan Adobe Illustrator.
In kasta oo ay jiraan shabakado badan oo kala duwan oo shabaqa ah, maanta waxaan dooranay in yar, laakiin waxaan aaminsanahay inay muhiim u yihiin naqshadayaasha qaabeynta. Haddii aad tixgeliso, waxaad naga caawin kartaa inaan ku dhammaystirno liistadan bangiyada garaafka iyada oo loo marayo annaga qaybta faallooyinka oo ku yaal aagga hoose.
Waxaan ku bilaabi doonnaa xulashadeena mid ka mid ah bangiyada ugu muhiimsan ee ku hadla af Isbaanishka, taas oo ah in xaddiga qalabka ay bixiso Freepik uu yahay mid aan xad lahayn. Halkan waxaad ka heli kartaa buraashyo, sheybaarrada noocyadooda oo dhan iyo sawirro vectorized ah. Laga soo bilaabo sawirada ilaa walxaha qurxinta, kaararka ganacsiga, kaararka boostada ama boorarka. Waxa ugu wanaagsan, uma baahna nooc diiwaangelin ah, in kasta oo ay tahay in maskaxda lagu hayo in loo adeegsado agabkeeda ay lagama maarmaan tahay in la xuso qoraaga. Waxay la shaqeeyaan shatiyada sifeyn.
Bangigan wuxuu ka kooban yahay xulasho ballaaran oo ilaha noocyadeeda kala duwan ah Adobe Photoshop iyo Adobe Illustrator. In kasta oo ay run tahay inay inta badan hiwaayadda u yihiin dabeecadda, haddana waa kursi aan loo baahnayn in lagu dhex arko naqshadeeyayaasha cusub. Markaad soo dejiso xoriyadooda, waxaad ku isticmaali kartaa xorriyad buuxda iyadoo aan loo eegin xuquuqda iyo xuquuqda daabacaadda. Waxay noqon doontaa mid gebi ahaanba sharci ah in loo isticmaalo waxyaabaha laga soo saaray Bittbox labada mashruuc ganacsi iyo mashaariic shaqsiyeed. Waa u qalantaa fiirin.
Waxay ka kooban tahay noocyo badan oo vektor ah, labadaba qaab bilaash ah iyo mid heer sare ah. Waa bog mawduucyo badan ka hadlaya in kasta oo cilladda ugu weyni ay tahay in aanu fududaynaynin raadinta iyada oo loo marayo liiska qaybaha. Xitaa haddii ay wakhti qaadato in lagu baaro buugga oo dhan, way u qalantaa maxaa yeelay waxaa jira sawirro aad u xiiso badan iyo sawirro vectorized ah. Waxay sidoo kale leedahay qayb casharro ah oo kaa caawin doonta inaad xoojiso aqoontaada arjiga iyo mid kale oo loogu talagalay ilaha caymiska. Waa lagu talin karaa!
Waxay leedahay muuqaal hiwaayad yar iyo tas-hiilaadyo waaweyn si loo helo natiijooyinka raadinta wanaagsan. Baarka baaritaanka ka sokow, waxaa ku jira qaybo-hoosaadyo kala duwan, oo ay ka mid yihiin tilmaamo, sheybaarro, vektoro loogu talagalay astaamo, calammo iyo dherer iwm. Waxay sidoo kale leedahay ikhtiyaar ay ku heli karto waxyaabaha hadda jira sidaa darteed waxay noqon doontaa mid aad u fudud in lala socdo wararka ugu dambeeyay ee bangigan uu na siinayo. Boggan waxaad ka heli kartaa fallaadhihii qaab-dhismeedka iyo midabbada ama sawirrada hal-abuurka ah sidoo kale uma baahna nooc diiwaangelin ah.
Waxay noo ogolaaneysaa ikhtiyaarka aan ku wada shaqeyn karno bogga oo aan ku darno shaqadeena keydkeeda. Waxaa ku jira tiro aad u tiro badan oo ah: Abstract, ganacsi, xayawaan, kartoon ... Waxay kaloo bixisaa mashiin raadin (in kasta oo sida xulashooyinka kale ay tahay bog ku qoran Ingiriis) iyo qayb ay wararka ugu dambeeya ku jiraan. Wax noo ogolaan doona inaan la socodno wararka ugu dambeeya. Dhibic lagu daray ayaa ah inaysan u baahnayn diiwaangelin oo soo dejinta iyo xawaaraha raadintu aad ayey u fiican tahay.
123 Vectors Bilaash ah
Waxaa laga yaabaa inay tahay tan ugu macquulsan dhammaanteed iyada oo ay ugu wacan tahay nashqadeynta iyo goobaha raadinta ee ay bixiso. Waxa intaa dheer in lagu daro vektoro noocyo kala duwan ah, waxa kale oo ku jira burush iyo waxay ku siisaa alaabooyin qaab bilaash ah (bilaash) iyo mid heer sare ah. Uma baahna diiwaangelin sidaa darteed nidaamka soo dejinta iyo isticmaalka waa mid dhakhso badan, in kasta oo ay lagama maarmaan tahay in la helo waxyaabaha ugu sarreeya. Waxay u taagan tahay tayada sare ee qalabkeeda iyo mawduucyada kaladuwan ee kaladuwan ee ay isugu keento bogaggeeda. Dhab ahaan waa lagula taliyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Bogagga TOP si aad u soo dejiso ilo bilaash ah oo loogu talagalay Adobe Illustrator
Runtii iyagu waa kuwa ugu fiican
Jawaab Oswaldo Montilla
TOP 50 goobood oo laga soo dejisto waxyaabaha 3D: Moodello iyo walxo bilaash ah